स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म पनि मतगणना भएन | News Nepal
वालिङ । वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै दुई वर्ष हुँदा पनि मतगणना हुनसकेको छैन।
प्रकाशित मिति : 2019-01-08
अलबिदा धनिराम ! पार्थिव शरिरमा प्रचण्डले ओढाए पार्टीको झण्डा
चितवन । हृदयघातनबाट निधन भएका नेकपाका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री धनिराम (डिआर) पाडेलको पार्थिव शरिरमा प्रचण्डले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली...
काठमाडौँ । पप्पु कन्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको छ । पप्पु कन्ट्रक्सनले बनाएका अधिकांश संरचना...
को हुन पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पाैडेल ?
काठमाडौ । धनिराम पौडेल अर्थात डिआर पौडेल कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक सच्चा इमान्दार नेता मानिन्थे । बुवा हरिप्रसाद पौडेल र आमा...